20 / 07 / 2021 20 / 07 / 2021 ခရစ် Wharfe 564 Views စာ0မှတ်ချက် 76201 ဗိုလ်ကြီးကို Carter & အဆိုပါ Hydra Stomper, Bucky ကျီများ, Captain America, ဗိုလ်ကြီးဂarter, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Disney, Disney+, Gamora, Instagram ကို, Lego, Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego Marvel, Lego Marvel စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego Minifigures, Lego ကောလာဟလများ, Marvel, သေးသေးလေး, ကောလာဟလာ, ဆမ် Wilson, Thanos, အဆိုပါစွန်ငှက်နှင့်ဆောင်းရာသီ Soldier, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?
ကောလာဟလများနှင့်ပတ်သက်သည့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များ Lego Marvel စုဆောင်းထားသောအသေးစား အွန်လိုင်းပေါ်ထွက်လာပြီဖြစ်သော်လည်းအတည်ပြုထားသောစီးရီးများတွင်ကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ရမည့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၏ပြည့်စုံသောရုပ်ပုံလွှာကိုပေးသည်။
အောက်ပါ မနေ့ကအစီရင်ခံစာ ကောလဟာလများ၏စုံတွဲတစ်တွဲနှစ်ခုအလွန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၏ Disney+ ဇာတ်ကောင်, Instagram ကိုအသုံးပြုသူ lego_သတင်း ၂၁ ယခု (ကနေတဆင့်မျှဝေခဲ့သည် lego_club_news) နောက်ထပ်သုံးခုအတွက်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များ၏အလားအလာစာရင်း Marvel သေးသေးလေး။
ထိုအရင်းအမြစ်၏အဆိုအရ Warlord Gamora သည် What If …ကို အခြေခံ၍? Thanos ကို Mad Titan အဖြစ်အစားထိုးလိုက်သော Gamora ကိုမြင်ရမည့်အဖြစ်အပျက်သည်သံချပ်ကာ (တိကျသောသံချပ်ကာအပိုင်းအစထက်) ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမည်ဖြစ်ပြီး lightaber hilt နှင့်နှစ်ခုမှဓါးနှစ်ပြားပါသည့်ဓားကိုသယ်ဆောင်သွားလိမ့်မည်။ Ninjago လက်နက်များ။
ဗိုလ်ကြီးကို C ၏ဗားရှင်းarter ထဲမှာထည့်သွင်းခံရဖို့ကဆိုသည် Lego Marvel စုဆောင်းထားသောအသေးစား (တွင်ထည့်သွင်းတဆန့်ကျင်အဖြစ် 76201 ဗိုလ်ကြီးကို Carter & အဆိုပါ Hydra Stomper) တစ်ခြားကွဲပြားသော Tesseract အပိုင်းအစတစ်ခုနှင့်အတူပါ ၀ င်လိမ့်မည်။ အကယ်၍ What If ... ကိုနှစ်ဆတိုးရန်ဆင်ခြေပေးမည်ဟုမျှော်လင့်နေသည်။ ဇာတ်ကောင်။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့် The Falcon နှင့် The Winter Soldier တွင်ပေါ်ထွက်လာသောကောလာဟလသတင်းများဖြစ်သည့် Bucky Barnes နှင့် Sam Wilson အသေးစားဓာတ်ပုံများသည် Captain America ဒိုင်းလွှားတစ်ခုနှင့်အတူလာမည်ဟုသတင်းများကဆိုထားသည်။
ယခုအချိန်အထိထွက်ပေါ်လာသောကောလာဟလများအကြားတွင် ၁၂- ခိုင်မာသောစီးရီးအများစုမှမျှော်လင့်ရမည့်အရာများအားပြည့်စုံသောစိတ်ကူးတစ်ခုရရှိထားသည်။ Marvel ဇာတ်ကောင်။ ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ နောက်ဆုံးပေါ်အပြည့်အဝ rundown သည် စုဆောင်းထားသောအသေးစား စီးရီး - နှင့်ဤနည်းပညာပိုင်းနေဆဲကောလာဟလများနေစဉ်, ဒါကြောင့်ဓလေ့ထုံးတမ်းဆားဆားနှင့်အတူခေါ်ဆောင်သွားသင့်ပါတယ်, ဒါပေမဲ့သူတို့ကဒီအချက်အားဖြင့်တော်တော်လေးရိုက်ပြီးအပေါ်ခံစားရတယ်။
← LEGO 40486 Adidas မူရင်းစူပါစတား GWP အတွက်နောက်ဆုံးအခွင့်အရေး
Lego BrickHeadz 40490 NINJAGO 10 နောက်ကျောစတော့ရှယ်ယာဖြစ်ပါတယ် →